अनुहारको चाउरीपनाले दिक्क हुनुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् फिटकिरी – Khabar Silo
काठमाडौँ । धेरैे मानिसहरु घरमा फिटकिरीको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर के तपाईंलाई थाहा छ यो तपाईंको स्वास्थ्य र सौन्दर्य समस्याहरूबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। त्यसोभए यसको प्रयोग गर्ने तरिकाहरू र फाइदाहरूको बारेमा जानौं,, जब कसैलाई युरिन इन्फेक्शनसँग सम्बन्धित कुनै समस्या छ भने त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो समस्याको बारेमा अरुलाई भन्न डराउने गर्दछन् या त कहिल्यै भन्न नै नपरोस् भनी यस्ता कुराबाट टाढा नै रहन्छन् । तर फिटकरीको मदतबाट प्राइवेट पार्ट सफा गरेर युरिन इन्फेक्सनबाट बच्न सक्छौँ ।
यस्तैमा कोही कसैलाई कपालमा चायाँ पर्ने समस्याले सताइराखेको छ भने पनि तपाई यस समस्याबाट मुक्ति पाउन फिटकिरीको पानीले आफ्नो कपाललाई धनुहोस् ।
बढ्दो उमेरको साथ साथै आफ्नो अनुहारा पनि चाउरीपना आउन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा पनि थोरै फिटकिरीलाई पानीमा हाली त्यसलाई घोलेर आफ्नो अनुहारमा लगाई यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
यदि कसैलाई श्वासप्रश्वास सम्बन्धित बिमारी छ भने पनि तपाई फिटकिरीको साथमा मह खान सक्नुहुन्छ । यदि तपाई नचाहिने रौँबाट छुटकारा पाउन चाहानुहुन्छ भने पनि फिटकिरीलाई गुलाबजलमा मिलाई स्किनमा लगाउन सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईको सबै समस्या सजिलैसँग हट्न सक्छ ।
व्रतमा किन खाइन्छ सिधे नुन ?
धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि पवित्र महिना, साउन । यस महिनामा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ । शरीर र मनलाई शुद्ध गरेर ब्रत बस्ने, मनलाई भक्ती–भजनमा लगाउने, दान दिने गरिन्छ । साउनको महिनामा व्रत बस्दा आफ्नो कामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास छ । त्यसो त वर्षायामको यो समयमा व्रत बस्नु शारीरिक हिसाबले उत्तिकै फाइदाजनक पनि छ […]
भुइँमा बस्न छोडेको कति वर्ष भयो ? बस्न र खाना खान पनि तपाईं कुर्सीकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन त ? अब भुइँमा सुत्नुभएको छ भनी प्रश्न सोध्दा तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला । पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी आधुनिक भनाउँदाहरू झुटो प्रतिष्ठाका लागि महंगा फर्निचर किन्छौं । दिनभरिको मेहनतपछि नरम ओछ्यानमा डङ्रङ्ङ पछारिँदा आराम […]
बोनिता शर्माले गएको असोज २४ गते आफ्नो २८औँ जन्मदिन मनाउनुभयो । यस वर्षको जन्मदिन उहाँको लागि विशेष मात्रै बनेन, ऐतिहासिक र अविस्मरणीय नै रह्यो । ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी)ले विश्वकै उत्कृष्ट प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालबाट बोनिता शर्मालाई समेट्यो। यस वर्षका विश्वका प्रभावशाली १०० महिलाको सूचीमा बोनिता ७५औँ नम्बरमा हुनुहुन्छ । बीबीसीले पृथ्वी, ज्ञान, […]